आफ्नो शरीर को तापमान को जन्म पछि केही दिन 37 देखि वृद्धि गर्न सकिन्छ 37.4 डिग्री गर्न। त्यसपछि बिस्तारै एक वर्ष मुनिका बच्चा को तापमान 36,2-37 डिग्री भित्र सामान्यकृत। निर्धारण गर्न सामान्य तापमान , आफ्नो बच्चा को उहाँले स्वस्थ र शान्त जब, यो मापन, यो एक मा धेरै दिन र एकै समयमा लागि मनमोहक छ। तपाईं दिनमा यसलाई तीन पटक के र परिणाम रेकर्ड गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, रोग बच्चा तपाईं शायद कि यो ज्वरो निर्धारण छौँ।
को तापमान मापन बगल, कमर र तिध्रा बिचको भाग वा मलाशय मा हुन सक्छ एक शिशु। तपाईं pacifier थर्मामीटर प्रयोग र मुख मा तापमान मापन गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् कि यो rectal तापमान आधा एक डिग्री मुख भन्दा उच्च र एक डिग्री को मलाशय भन्दा उच्च। धेरै सानो मा वृद्धि, जस्तै बच्चा 37 को तापमान, यो रोग एक साइन हुन सक्छ भने, यो राम्रो व्यक्तिगत सुविधा हुन सक्छ। एक शिशु, या बस तात्दै देखि सार्दा धेरै भएको बच्चा उत्साहित छ भने, तापमान बढाउन सक्छ।
जब एक वर्ष एउटा बच्चा अप मा रोग को तापमान प्राय मापन गर्न3पल्ट एक दिन, र यदि आवश्यक। प्रारम्भिक रोग मा बच्चाहरु शरीर यो टीका, आदि प्रतिक्रिया, तात्दै, बच्चालाई वृद्धि र teething अन्य कारक प्रभावित हुन सक्छ, प्रतिक्रिया तापमान मा वृद्धि दिन सक्छ, तर तथापि तथापि, आफ्नो बच्चाहरु यस्तो रूघाँ रूपमा, रोग अन्य संकेत छ भने, यो आवश्यक चिकित्सकको सल्लाह छ। बच्चालाई तापमान 37-38 डिग्री गर्न rises गर्दा, यो शरीर को एक सुरक्षा प्रतिक्रिया हुन सक्छ। एक बच्चा यसलाई राम्ररी वहन भने यो तल गोली सिफारिस गरिएको छैन।
किनभने यो दौरा शामिल हुन सक्छ 39 डिग्री माथिको एक वर्ष एउटा बच्चा माथि को तापमान, उहाँलाई लागि खतरनाक छ। तसर्थ, यस मामला मा, यो antipyretics प्रयोग गरेर कम हुनुपर्छ। तपाईं उहाँले कसरी antipyretic जवाफ रोग, कुनै पनि थप लक्षणहरू थियो कि, ध्यान दिएर बच्चालाई आफ्नो सामान्य अवस्था हेर्न आवश्यक? यदि शिशुहरू मा तापमान 38.5 को स्तर माथि उठन भएन र बच्चा सामान्य यो जवाफ, तल्लो यो आवश्यक छ। थप वृद्धि संग आफ्नो बच्चा paracetamol यसको संरचना मा भएको एक antipyretic हालतमा दिनुपर्छ। घट्दै तापमान संग, दबाइ फेरि चिकित्सा गर्न वृद्धि संग बंद गर्नुपर्छ।
यसलाई थप पानी पिउन बच्चालाई दिन आवश्यक छ। बच्चा खान चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले उहाँलाई जबरजस्ती-खुवाउन आवश्यक छैन। तपाईं निधारमा भिजेको कपडा धारण यदि राम्रो मद्दत, गर्मी सुख। यसलाई मा ताजा हावा गर्न कोठा हवादार अक्सर प्रयास गर्नुहोस्। यो मनमोहक घरमा थर्मामीटर को धेरै प्रकार छ। एक वर्ष मुनिका बच्चा को तापमान बगल मा मापन गरिएको छ भने, त्यसपछि यसलाई राम्ररी पारा थर्मामीटर गर्न छ। यो 5-10 मिनेट राख्नुपर्छ 36,0 डिग्री को स्तरमा मिलान पछि। तथापि, तिनीहरूले बच्चा JERK सक्नुहुन्छ किनभने गुदा को तापमान सिफारिस छैन उपाय, थर्मामीटर दुर्घटनाग्रस्त यो traumatizes।
तपाईं बच्चा को बगल मा थर्मामीटर राख्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि आफ्नो हात अन्तर्गत थर्मामीटर जोर र, इच्छित समय पछि सम्म उनको काखमा उसलाई समातेर आफ्नो काखमा र अँगालेर मा बच्चा लिन। गुदा मापन को मामला मा सबै भन्दा उपयुक्त छ इलेक्ट्रोनिक थर्मामीटर। यसलाई चाँडै एक परिणाम र थप सुरक्षित, मापन पूरा गर्दा, उहाँले चेतावनी संकेत दिन्छ उत्पादन गर्छ। बगल मा मापन मा किनभने यसले शरीर संग तंग सम्पर्क सुनिश्चित गर्दैन यो सही परिणाम देखाउन छैन अक्सर छ। गुदा मा मापन लागि, यो थर्मामीटर आदर्श छ। मा निधारमा तापमान पट्टी पनि छन्, तर तिनीहरू सही तथ्याङ्कले देखाउँछ छैन, तर केवल तापमान वृद्धि संकेत गर्छ।
बच्चाहरु को लागि खोकी सिरप राम्रो (ड्राई र भिजेको)
"Pediashur": समीक्षा, निर्देशन, मूल्यहरू। धुलो शिशु सूत्र को समीक्षा आमाबाबुले "Pediashur"
कसरी बच्चा मा टाउको जुम्रा निको गर्न?
मेनु 8 महिना पुरानो बच्चा। र कसरी के प्रविष्ट गर्न?
बच्चा शान्त गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। एक hyperactive बच्चा: सिफारिसहरू आमाबाबुले
बिहान शौचालय नवजात
फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका: ठाँउहरु र रोचक तथ्य
"Revoleyd" (eltrombopag) analogues मूल्य। सस्ता Revoleyd कहाँ किन्न
Endocervical cysts - साधारण neoplasm
द्वारा इच्छा उत्तराधिकार मा कर। एक उत्तराधिकार प्राप्त गर्दा कर
तपाईंको आफ्नै हातले घर सजावट लागि रोचक विचार। सजावट को तत्व
एक हाइपरिमेसन ब्लडेर के हो?
के सलाद लागि बाहेक, हिउँदमा ताजा खीरे देखि खाना पकाउनु? के खाने को लागि ताजा खीरे र टमाटर देखि पकाएको सकिन्छ: व्यञ्जनहरु
तपाईंको हातले बगैंचा
"एन्ड्रोइड" मा टर्च: सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग
बच्चाहरु पूरा लागि backpacks: मालिकको, सुविधा र प्रकार को समीक्षा
यस लेख को लागि साइट - आफ्नो स्रोत को पदोन्नति को सबै भन्दा राम्रो तरिका